ဂျာမနီမှာကြီးကျယ်သောတောင်တန်းများရှိသည်, အသက်ရှု - ဆည်းပူးကျေးလက်, နှင့်ရထားခရီးသွားစေတဲ့နာမည်ကျော်မြို့ကြီးများတစ် ဦး စိတ်ဝင်စားဖွယ်အတွေ့အကြုံကို. ရှိပါတယ် အများအပြားအလွသောနေရာများ ဘာလင်အပါအဝင်ကြည့်ရှုရန်, မြူးနစ်, ဟမ်းဘတ်, Cologne, နှင့် Frankfurt, နှင့်များစွာသောအခြား. ဤရွေ့ကားဟော့စပေါ့နှင့်သေးငယ်မြို့များအားလုံးတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာစည်းရုံး Hi-Speed ​​ကိုအားဖြင့်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေကြသည် ရထားစနစ်က. ဤသည်ဂျာမနီနိုင်ငံရှိမီးရထားခရီးသွားလာနိုင်အောင်လွယ်ကူစေသည်. ဤတွင်အဘို့အ holidaymakers များအတွက်လမ်းညွှန်ဖြစ်ပါသည် ဂျာမနီမှာမီးရထားခရီးသွားလာ သငျသညျအမြားဆုံးရှိသေချာစေရန် ပျော်စရာခရီး ဖြစ်နိုင်သော.
ဂျာမနီ၌ရထားခရီးသွားခြင်းကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုခြင်းသည်တစ်နေ့တာဖြစ်သည်, အစာရှောင်ခြင်းအချင်းချင်း Express ကိုအပါအဝင်, ထိုင်ခုံကြိုတင်မှာကြားထားရန်မလိုအပ်ပါ. သို့သျောလညျး, သင်သည်သင်၏ခရီးစီစဉ်နေကြသည်လျှင်မထိခိုက်လည်းမရှိ ကြိုတင်မဲအတွက်သင့်ရဲ့ထိုင်ခုံ booking. ရှုခင်းအဘို့အပြတင်းပေါက်ထိုင်ခုံ Secure သို့မဟုတ်ပဲသငျသညျအမြင့်ဆုံးနှစျသိမျ့တွေ့ကြုံခံစားစေရန်သင့်ရဲ့ထိုင်ခုံကိုရွေးပါ.
ဂျာမဏီနေရာကောင်းတခုဖြစ်ပါတယ် မိသားစုနှင့်အတူသွားလာ. ဂျာမန်မီးရထားရထားတွင်, အသက် (၆) နှစ်အောက်ကလေးများသည်ခရီးသွားလက်မှတ်မလိုအပ်ဘဲအခမဲ့သွားလာရသည်. ကလေးများကျော်6ဒါပေမဲ့ အောက်မှာအသက် 15 အခမဲ့ကိုလည်းခရီးသွားလာ သူတို့တစ်တွေခ-ပေးဆောင်အရွယ်ရောက်ဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည်ကိုတစ်ကြိမ်.